Kunini apho kukho ukulibaziseka kwentetho ebantwaneni? | Bezzia
Kunini apho kukho ukulibaziseka kwentetho ebantwaneni?
UMaria Jose Roldan | 04/06/2022 13:28 | Iintsana
Elinye lawona maxesha alindelweyo kubazali kuxa umntwana ezelwe uyakwazi ukubhuqa aze athethe amazwi akhe okuqala. Noko ke, mntwana ngamnye wahlukile yaye kuya kubakho abanye abaziingxaki ngakumbi xa kufikelelwa ekuthetheni nabanye abanengxaki. Ukuthelekisa yenye yeempazamo ezinkulu ezenziwa ngabazali, ngakumbi xa kuthethwa ngophuhliso lolwimi.
Musa ukuthe phithi kumbandela wentetho kwaye ube nomonde de kufike elo xesha. Kwinqaku elilandelayo sikuxelela xa umntwana eqala ukuthetha kwaye ixesha apho kukho ukulibaziseka kwintetho.
1 Wonke umntwana wahlukile
2 Kweliphi ixesha apho kunokulibaziseka kolwimi?
3 Indlela yokunceda umntwana ekuphuhliseni ulwimi
Wonke umntwana wahlukile
Xa kuziwa kuphuhliso lolwimi, kufuneka kuthiwe umntwana ngamnye wahlukile kwaye ufuna isingqisho sakhe xa ethetha. Ukulibaziseka kwentetho kwenzeka xa kuthethwa ukuba uphuhliso lolwimi aluhambelani nobudala bomntwana.
Ngendlela eqhelekileyo, kunokuthiwa umntwana uqala ukuthetha amagama akhe okuqala ukusuka kunyaka omnye ubudala. Ngeenyanga ezili-18 ubudala umntwana ufanele abe namagama amalunga ne-100 kwisigama sakhe yaye kwiminyaka emibini ubudala kufuneka isigama sakhe sande ngamagama amalunga nama-600. Kwiminyaka emi-3 ubudala, kufuneka benze izivakalisi ezinezinto ezintathu kwaye zibe namagama angama-1500.
Kweliphi ixesha apho kunokulibaziseka kolwimi?
Kusenokubakho ingxaki yolwimi xa uneminyaka emibini ubudala akakwazi ukwenza izivakalisi ngamagama amabini. Kukho inani leempawu ezinokubonisa ukuba kukho ukulibaziseka kwintetho, ngakumbi xa eneminyaka emi-3 ubudala:
Ayikwazi ukwenza izivakalisi ukhupha izandi ezizimeleyo kuphela.
Ayisebenzisi naluphi na uhlobo lwesindululo okanye ikhonkco kunye khetha ukwenza lula izandi.
Akakwazi ukuzila izivakalisi ngokwakhe kwaye ezo azenzayo zibangelwa kukuxelisa.
Uninzi lweentsana eziqala ukuthetha emva kwexesha, bathanda ukululungisa ulwimi lwabo ngokuhamba kweminyaka.
Indlela yokunceda umntwana ekuphuhliseni ulwimi
Abazali banokuqalisa ukufunda amabali ukuze umntwana aqhelane ngokuthe ngcembe nolwimi.
Lungiselela izivakalisi ezilula ezilungelelaniswe nobudala bomntwana kunye zisebenzise yonke imihla.
Kulungile ukubiza amagama ngamaxesha onke izenzo ezahlukeneyo ekufuneka zenziwe.
phinda ngokuqhubekayo kwaye amaxesha amaninzi ngemini amagama emihla ngemihla njengendlu, ibhedi, amanzi, njl.
Dlala imidlalo ethile ehambelanayo nomntwana ngolwimi okanye intetho.
Ngamafutshane, akukho mfuneko yokukhathazeka kakhulu malunga nokulibaziseka okuthile kwintetho kubantwana nakwiintsana. Mntwana ngamnye udinga esakhe isingqi kwaye akulunganga ukumthelekisa nabanye abancinci. Ukuba, nangona iminyaka, umntwana unobunzima bokuthetha, yinto efanelekileyo ukuya kwingcali ukuba ikhuphe nayiphi na ingxaki enokuphazamisa ngokuthe ngqo ukuphuhliswa kolwimi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Iintsana » Kunini apho kukho ukulibaziseka kwentetho ebantwaneni?
Ukuhlala kwindlu emdaka kuyichaphazela njani impilo yakho
I-meatballs e-spiced kwi-sauce kunye ne-broccoli kunye ne-yogurt